Cape Mountain Zebra - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Cape Mountain Zebra
I-Cape Mountain Zebra (Equus zebra zebra)
I-Cape Mountain Zebra yincinci yeeZebra zeentlobo, kwaye inomlinganiselo we-230-260 kg kunye nobude bamagxa ukusuka kwi-1.16 m ukuya kwi-1.28 m. Ekubeni imivimbo emzimbeni incinci kunezo zimbombo zeBurchell, zikhona ezinye. Imivimbo egciniweyo emilenzeni iya kwenyuka ukuya kwiindawo ezithile. Izindlu zokuhlala zindwendwe zifakwe imivimbo emnyama ebanzi, kunye neprogram ye-gridiron emanqaku amancinci, amnyama amanqaku avela kwi-rump. Izibilini zintsundu kwaye azikho naziphi na iintambo. Zineendlebe ezinde (220 mm) kunye neempondo ezahlukileyo.
Zidibanisana ngokuhlakulela iinkomo ezi nhlanu kunye neentsiba zazo, phantsi kobukhokeli be-stallion/indoda enye. Amagqabi angaphezu kwe ndoda leyo adibanisene namaqela ebhekele.
Apho zifumbaneka khona
Kwakudala kusasazwa kwiintaba zaseMpuma naseNtshona Koloni. Ngenxa yoxinzelelo lokuzingela le ntlobo yayiphelile ngo-1930. Yagcinwa ngo-1937 isimemezelo seNtaba yeZebra, kwisithili se-Cradock sePhondo leMpuma Koloni. Namhlanje kuphela ziintathu zikhona ngokuqhelekileyo, ezikwiiNtaba zaseKamanassie, iintaba zeGamka kunye neNtaba yeZebra yeSizwe.
Inani elitsha kwi-De Hoop Nature Reserve libandakanywa ngabantu abafuduswayo ukusuka kwiNtaba yeZebra yeSizwe, kwiiNtaba zaseKamanassie, kunye neendawo ezidlulayo ze-Kouga ne-Outeniqua ezintabeni. Ezinye iindawo ezincinci zisungulwe kwiMpuma Koloni kunye ne-Karoo encinci kwiindawo ezincinci zemidlalo, ngokufuduka kwiNtaba yeZebra yeSizwe.
Emva kokusiwa kwiPalamente yaseMzantsi Afrika njenge 'donki yebhola' iJerse Mountain Intaba yeZebra ngethamsanqa iphile ngokuvota ukuba ibe ne-ndawo yazo ekhethekileyo esungulwe ngokukodwa ukukhusela kwazo. Amanani ayehlile angaphantsi kwama-50 kunye nengxoxo yombuso waseMzantsi Afrika ngo-1930 ngezantya yazikhokelela kwindawo yokuzigcina, nangona kukho incaso ephikisayo.